Ukuthumela - ama-Buddhatrends
Sithumela emhlabeni jikelele ehlanganisa iNyakatho neMelika Melika, iYurophu, i-Asia, i-Afrika, i-Oceania, nokuningi. Sisebenzisa izinsizakalo ezinkulu, ezinokwethenjelwa zokuthutha amazwe ukuqinisekisa ukuthi iphasela lakho lifika lapho ufika khona ngokuphepha nangokuphepha.
INGABE LUNGAQALA KANJANI UKUTHUTHUKISA UKUTHUTHA?
Ama-oda ngokuvamile athatha izinsuku ezingu-7 ukuze asebenze ngaphambi kokuba athumele - ngaphandle kwamaviki namaholidi. Ngesikhathi samaholidi ukucubungula izikhathi kungathatha izinsuku ezingu-14.
INGABE ISIKHATHI SOKUPHILA SIKHULU?
Imiyalo yase-US izothunyelwa nge-e-packet ne-International Orders izothunyelwa kuye ngokuthi ukugcwaliseka isikhungo umkhiqizo uvela.
I-Transit Times eya e-United States: I-12 - Izinsuku zebhizinisi ze-20
Izikhathi zokuhamba eziya e-International: 10 - Izinsuku zebhizinisi ze-21
Izikhathi zesikhathi sokuhamba zitholwa emavikini e-3.
Kunezimo ezingenakulawulwa (izinhlekelele zemvelo, amaholide, isimo sezulu, njll) esingabangela ukuhlehliswa kokuthumela. Nakuba amaphakheji amaningi azofika ngesikhathi, kungase kube khona izimo nokulibazisa ukuthi abathwali bethu bangase bahlangabezane nazo. Ngenxa yalesi sizathu, asiqinisekisi isikhathi esiqondile sokudiliva; le nkinga yokulethwa yiyona yinkampani yenkampani yokuthumela.
YINI ICOURIER EZOKUSEBENZISWA NGOKUTHUTHUKISWA?
Inkonzo ye-courier empeleni incike esikhungweni sethu sokugcwaliseka. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo wethu utholakala emazweni ahlukene ukuqinisekisa ukuthi uwuthola intengo engcono kakhulu. Izinsizakalo ze-courier ziyahlukahluka ezweni lonke. Ngaphandle kokusungulwa kwebhizinisi elinamandla ne-courier service, asikwazi ukuthola amazinga ashibhile ngaleyo ndlela ngesivinini esizolahlekelwa yizimakethe zomhlaba ezifana ne-Amazon nokunye.
Kodwa-ke, sizobe siqinisekisa ukuthi uthola iphakheji lakho futhi unikeza umshwalense ephakheji lakho uma kwenzeka iphakheji elahlekile nelahlekile
Ngabe nginemininingwane eminingi ku-1 ITEM, futhi NGAMUNYE WAMEME UMTHETHO OMUNYE, KUNGANI?
Senza konke esingakwenza ukuze sinciphise izindleko ekugcineni kwakho ukuze ungakhokhi intela / amaphrimiyamu aphezulu ukuze uthole izinto zakho. Uma ubeka i-oda kanye nathi ngezinto eziningi, cishe cishe kuzothunyelwa kuphakheji engaphezu kweyodwa. Sicela uvumele isikhathi sokuba zonke izinto zakho zifike.
INGABE NGOKWENZA UKUFAKA IZIMALI EZINYE NOMA I-TAX CUSTOM KUZIMALI?
Amanani adalulwe ekwamukeleni kwakhokungenzeka behluke kulokho oye wayala kodwa sicela ungakhathazeki. Ngokujwayelekile ukuthi isikhungo sethu sokugcwaliseka sizokwenza ukuphawula njengamanani aphansi kakhulu noma ukubeka izinto njengezipho ngokuphelele. Lokhu ukuvimbela amanani / imisebenzi yangaphandle yokungeniswa okufakwe ekupheleni kwakho njengamazwe athile lezi zindleko ezengeziwe zibiza kakhulu.
Ngangifaka umyalelo kodwa angizange ngamukele ukuboniswa kwe-EMAIL ... YINI EYA KUYA?
Sicela uqinisekise ukuthi i-imeyili yakho ilungile uma ubeka umyalelo. Ngomusa hlola ifolda yakho ye-SPAM ukubona ukuthi i-imeyili yakho yokuqinisekisa ithunyelwe lapho. Uma kungenayo i-imeyili yokuqinisekisa, sicela uthumele i-imeyili ithimba lethu lokusekela ngefomu lokuxhumana kusayithi lethu
KUNGANI UKUNGE NGIKHAYA EKHAYA?
Noma ubani ekhaya angathola iphakheji egameni lekhasimende. Ngokuvamile, umthumeli uzoshiya isikhwama seqoqo uma kungekho muntu ekhaya futhi ungase uqoqe iphasela lakho eposini eliseduzane nawe.
Ngifisa ukushintsha umyalelo wami / i-ADDRESS, angingakwenza?
Nakuba sikhuthaza kakhulu ukuthi ubuke kabili ubukhulu namakheli ngaphambi kokubeka umyalo nathi, siqonda ngokugcwele ukuthi izinto zivela futhi amaphutha angenziwa. Siyacubungula imiyalo ngosuku olufanayo ababekwe ngalo. Uma ushintsho ludingeka lenziwe ku-oda yakho sicela uxhumane nathi ngefomu lokuxhumana kusayithi lethu I-ASAP futhi sizokwenza konke esingakwenza ukuze senze lolo shintsho, kodwa asikwazi ukwenza izithembiso. Uma ngabe izinto (s) sezivele zithunyelwe kusuka esikhungweni sethu sokugcwaliseka asikwazi ukwenza izinguquko ku-oda. Uma kunjalo, ungathumela leyo nto ku-Warehouse yesifunda eliseduzane futhi lapho sithola khona singathumela into eqondisiwe. Sicela uxhumane nathi ukuze uthole ukuthi yikuphi indawo yokugcina yesifunda eseduze nawe evela ezweni lakini.
NGINYE UMBUZO OMBUZO WAMI KANYE NGOKUKHONA KWAKHO OKUNGAPHENDULWA LAPHO, NGINGOKUTHOLA KANJANI?
Sicela uxhumane nathi futhi sizojabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo yakho!